Mila ny fanohananao ny Global Voices · Global Voices teny Malagasy
Mila ny fanohananao ny Global Voices
Voadika ny 31 Desambra 2009 22:28 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, русский, Nederlands, বাংলা, English
Ry Mpamaky Global Voices Hajaina,
Te-hiangavy anareo izahay hanohana ny asanay ara-bola amin'ity taona 2010 ity.
Raha nanaraka ny asan'ny vohikala Global Voices, Global Voices Advocacy ary ny Rising Voices ianao, na ireo vohikalam-pandikan-teny 17 mavitrika amin'izao fotoana izao, dia hahamarika ny ezaka lehibe tsy mampino sy ny karazam-mpomba fijery samihafa ezahin'ny olo-tsotra mampita vaovao tantaraina. Avy amin'ny vazantany efatra manerna izao tontolo izao ny vondrona mpanoratra sy mpandika teny 350 izay tsy mitsaha-mitombo, ary mitantara zavatra azo itokisana ny fisiany amina toerana iray ho ren'izao tontolo izao. Manokatra varavarankely ho an'ny tontolo hafa izy ireo, manampy ny mpamaky hahalala bebe kokoa ny fiaraha-monina tsy dia mahazatra loatra sy ny tantarany.
Tao-miavaka tokoa ny 2009 ho anay. Namoaka tetikasam-pihavaozana vaovao izahay izay mipaka hatrany amin'ny farafetran'ny fitaovan-tseraseran'olo-tsotra, tahaka ny fandraisana an-tanana ny fikarohana fifanakalozana fandikanteny navoakanay; ny sehatra fiarovana ny fahalalaham-pitenenana an-tserasera navoakanay, Threatened Voices (Feo Voarahona); ary ny RuNet Echo, tetikasana tontolom-bolongana Rosiana navoakanay. Vao nampiditra tetikasa vaovao iarahana miasa amin'ny hafa ihany koa izahay, toy ny Transparency and Technology Network (Teknolojia sy ny fangaraharana), sy ny fifaninanana fahalalaham-pitenenana an-tserasera antsoina hoe Breaking Borders (Mamaky Sisintany), izay iarahana amin'ny Google. Amin'ity taona ity ihany koa izahay dia ampiketrehana amin'ny fampitomboana ny loharanom-bola mahasolo, manaika ny fahaizana manokana iarahan'ny ao amin'ny vondrona misy anay manampy ny fikambanana lehibe tahaka ny UNFPA (FNUAP) sy ny IDRC mba hitondra ny fomba fijerin'olo-tsotra amin'ny asa ataon'izy ireo.
Ireo mpikambana ao amin'ny fiaraha-monina Global Voices nandritra ny vovonana natao tanyBudapest tamin'ny 2008. saripikan'i mentalacrobatics.
Aty amin'ny fiafaran'ny faha-5 taona nijoroana izao, dia mampientanentana tokoa ny mamaky lahatsoratra avy amin'ny mpanorina sy ny mpandray anjara milaza ny anjara toeran'ity fiaraha-monina ity ho azy ireo. “Ny Global Voices dia. . . ny toerana alehako rehefa te-hahita hazavana ery amin'ny faran'ny tonelina aho, ilay antony tsy hanariana fanantenana raha mihalevona ny tontolon'olombelona rehefa manaraka ny onjam-piainany,” hoy ilay mpandray anjara miresaka an'i Madagasikara Lova Rakotomalala, izay nandany fotoana maro tamin'ity taona ity hanoratra momba ny savorovoro iainan'ny tanindrazany. “Satria, na dia efa tafalatsaka lalina aza ny toe-draharaha voatantara ao, dia mbola misy olona miaina ihany ao. Hitanao ao ny ezaky ny olona mitantara ny fiainany. Milaza aminao ireo tsy halahelo azy ireo fa ny hanohana azy ireo, tahaka ny namana, fa tsy zary ho adidy fotsiny. Tsy mila vonjy na fanampiana izy ireo fa mitady ny vahaolana mety ho avy aminao ihany koa, satria mety ho efa niainanao izany tamin'ny alalan'ny fiarahana mitolona.”
Lova Rakotomala nanao famelabelarana tao amin'ny Barcamp Madagasikara tamin'ny Jolay 2009. Saripikan'i rl_lita.
Tsara vintana izahay tamin'ny fanampian'ireo malala-tanana maro, izay mbola hanohy izany ny sasany amin'ity taona 2010 ity. Saingy mbola mitady ny fanohanan'ny mpamakinay izahay hahombiazan'ny Global Voices. Tontosa ihany ny tetikasanay noho ny ezaka lehibe ataon'ireo mpanolo-tena, saingy ny eo amin'ny matoan-drafitra no mila fanohanana, eo koa ny asan'ny fiarovana ny fampandrosoana sy ny fahalalaham-pitenenana, eo koa ny foto-drafitr'asa teknika—ary ny fampandrosoana sy ny fihavaozana ho avy.
Ny tolotra ataonao ho an'ny Global Voices no hahafahana manitatra ny fahafaha-mampita vaovao avy amina feo sy toerana maro kokoa, sy ahafahanay manolotra karazam-baovao maromaro kokoa amin'izay rehetra renay. Eo anatrehan'ny tahotra sy ny fikatonan'ny fampahalalam-baovao amin'ny vaovao avy any ivelan (‘i Etazonia) dia tena miankina amin'ny ain-dehibe tokoa ny hakanton'ny vaovao ampitain'olo-tsotra amin'ny fitateram-baovao maneran-tany.
Miangavy anao ary izahay handray anjara araka izay efanao. $25, $50, $100—na izay sanda azonao hanampiana anay hahafahanay hijoro tsara kokoa.
Ny tolotra moa dia azonao atao amin'ny alalan'ny PayPal amin'ny alalan'ny bokotra etsy ambany:
na amin'ny alalan'ny Kioska nomerika an'ny Tahiry fampindrama-bola ho fampandrosoana ny Media. Raha misy moa ny zavatra tianao hanontaniana dia miangavy izahay hitsidihanao ny takelaka Donate na mandefasa imailaka (tsy maninona koa na amin'ny teny frantsay aza) amin'i georgiap at globalvoicesonline.org.
Mankasitraka anareo tamin'ity taona 2009 ity ary mirary izahay mba ho heniky ny fifaliana sy ny fiadanana ny taona 2010.
- Georgia Popplewell sy i Ivan Sigal